usetyenziso lwe-ios luvumela i-aple iphone 7 ukudibanisa ukukopa imvelaphi emnyama yokukhanya kwesibane esivela kwi-iphone 8 / x
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ukusetyenziswa kwe-iOS kuvumela i-Apple iPhone 7 Plus ukuba ikope imvelaphi emnyama yokuKhanya kwePortrait kwi-iPhone 8 / X
I-Focos ivumela abasebenzisi be-iPhone 7 Plus ukuba babe neempawu ze-Portrait Lighting-esque Abo bane-Apple iPhone 7 Plus banokuqonda ukuba banqwenela ukuba baphucule i-Apple iPhone 8 Plus okanye i-Apple iPhone X, ngakumbi ukuba bayayithanda into yokuKhanya kwePortrait kwiimodeli ezintsha. Ngokukhanya kwePortrait, abasebenzisi banokudala iziphumo ezithile ezinzulu ngemvelaphi yomzobo, kubandakanya imvelaphi emnyama efihla ngokupheleleyo indawo apho umfanekiso ubuthathwe khona.
Kude kube ngoku, abo bane-iPhone 7 Plus kuye kwafuneka baphule i-jailbreak ifowuni yabo ukuze bafikelele kumanqaku. Kodwa ngoku, usetyenziso lokufota olunamagamaAmagqabantshintshiesele ihleli kwiVenkile yeApple, yongeze into entsha ebizwa ngokuba yi'Black Portrait 'imowudi eya kuvumela i-iPhone 7 Plus ukuba isebenzise ezinye zeenketho ezifanayo zePortrait Lighting ezifumaneka kwi-iPhone 8 Plus nakwi-iPhone X. Ubunzulu beziphumo ezifanayo kukubonelela ngePortrait Lighting okukhoyo kusetyenziswa iifilitha ze 'Mfanekiso omnyama' kunye 'neMifanekiso engasemva'.
I-Focos sisoftware yasimahla kwaye ifuna ukuba i-iPhone ilayishwe kuyo ibe nokuseta kwekhamera emibini yemowudi ye 'Black Portrait'. Oko kuthetha ukuba inqaku liyahambelana kuphela ne-iPhone 7 Plus, i-iPhone 8 Plus kunye ne-iPhone X. Zonke ezinye izinto zokubala ukufota ezinokusetyenziswa zinokusetyenziswa kwi-Apple iPhone 5s okanye kamva, ziqhuba i-iOS 11 okanye ngaphezulu. Ukukhuphela usetyenziso kwifowuni yakho, cofa koku ikhonkco .
usetyenziso aluzukukhupha i-android
Tshintshela kwi-G7 ThinQ ukuba ifowuni iyacotha, yatsho LG (incedwa nguAubrey Plaza)
I-Fortnite ekugqibeleni yongeza inkxaso kulawulo lwe-iOS kunye ne-Android ngohlaziyo lwamva nje
I-Instagram iqinisa imithetho yokusebenzisa umculo onamalungelo obunini kwiividiyo
Ukuyinyusa: ezi zezona ze-6 zeyona meko zintle ze-LG V20
I-Apple iPhone XS / Max vs Samsung Galaxy S9 / S9 +
Indlela yokuhambisa abafowunelwa kunye neekhalenda kwifowuni ye-Android ukuya kwi-iPhone